Sizinikele ukunika inkxaso, ulwazi nesikhokelo kwabo bachatshazelwa sisifo somhlaza kuMzantsi Afrika uphela.
WENZA NTONI UCANCER BUDDIES?
UCancer Buddies ngumbutho onomahluko. Siyavuma ukuba umhlaza uchaphazela izigulane ngaphaya komzimba nengqondo kwaye eyona mpilo igqibeleleyo ingathatha indawo ngonyango olupheleleyo lubandankanya amava eenkalo zonke zobomi bomntu.
Sinikeza ngenkozo ekhethekileyo yenkxaso, ulwazi nesikhokelo kwabo bachatshazelwa ngumhlaza buqu okanye ngobudlelwane. Okwenza sibe ngabakhethekileyo kukuba sisebenzisa amaqonga ajolise ekudibaniseni izigulane ezisandula kubanomhlaza kunye nabo bawoyisileyo, abaqeqeshiweyo ukuba bacebise kwaye bancedise. Oku kwenza ukuba izigulane ezinomhlaza neentsapho zazo ngokunjalo baqondane ngqo noluhambo, ngethemba lokuba ekugqibeleni baphile.
“uCancer Buddies uyayiqonda ukuba uhambo lwakho lomhlaza lunomahluko. Sivumele sikuncede, sikuxhase, sikuxhobise kwaye sikuvuselele”
UCancer Buddies unikeza ngenkozo eyiBuddy System eqhagamshelanisa omnye komnye apho izigulane ezinomhlaza zifumana iingcebiso ezinokuzisebenzisa, ulwazi, isikhokelo nenkxaso efikeleleka lula nasimahla, ivela kwabo baphila nomhlaza nabawoyisileyo. Le nkqubo yenkxaso eqhutywa kakhulu ngamavolontiya ethu iye yabekwa kwawona manqwanqwa aphezulu kwilizwe jikelele kwiiprojekthi ezijongene nobume bomphefumlo nentlalo, ngenxa yokuhambelana kwayo neenkqubo ezisemgangathweni wehlabathi liphela.
Ukongeza kwinkqubo yeBuddy Support, siye sakolula ukufikelela kwethu eluntwini ngokuzisa iqonga elitsha lokunikeza ngenkxaso ngobuxhakaxhaka balemihla ebizwa nge-iBuddy. Le nkqubo ye-iBuddy, eyeyona iquka iqokelela iinkalo ngeenkalo zenkxaso ngomhlaza eMzantsi Afrika, iqulathe iziphumo zophando oluphangaleleyo lwalemihla kwi-intanethi. Oku kunikeza bonke abo bayisebenzisayo ubuxhakaxhaka obukwinqanaba eliphezulu elitsha kraca elikunika ulwazi kwaye likuphilisa ngcono - nokuba usisigulane esinomhlaza okanye ungumkhathaleli walowo unomhlaza.
THETHA NATHI NAMHLANJE!
“Ulwazi luyomeleza, - zenjenjalo neeCancer Buddies zethu.”
Inkonzo yeCancer Buddy ifumaneka simahla, 100% kwiwebhusayithi yethu nakumaqonga encoko alemihla, kwinombolo yasimahla yemfonomfono, nakwiminxeba yabucala kaCancer Buddies. Zonke ezi nkalo zonxibelelwano zivuleleke nakubanina ochatshazelwa ngumhlaza nonjani na, nakweliphi na inqanaba, ohlala naphi na eMzantsi Afrika uphela, nje ngokucofa iqhosha.
Ngeminyaka yokukhula kwawo, umbutho iPeople Living With Cancer wawujolise ekusekeni inkqubo yenkxaso yomhlaza udibanisa omnye komnye ochatshazelwa ngumhlaza. Emva kwexesha iPLWC iye yaphuhlisa imbono ebanzi ekungoku izifumanisa ingumbutho owongamele nonoxanduva lwezinye iiprojekthi zomhlaza ezisebenzisanayo ngendlela encedisanayo ngobuchule, ilawulwa liqela labaphathi abaphuma kwakweziprojekthi.
Yenza Njani iCancer Buddies?
ICancer Buddies ineminyaka eyi15 inikeza ngenkxaso kwizigulane ezinomhlaza kwakunye neentsapho zazo, kwaye ngalo elo thuba sakhe ubutyebi bolwazi nokubambisana nezinye iintlangano. Ngoko ke, olu lwazi oluqokelelwe lwaze lwagcinwa kuvimba ofikeleleka lula nakubani na odinga ukulusebenzisa, oku kuquka nezinye iinkonzo ezincedisayo ngenkxaso, ukanti nezo zimbambekayo.
Njengombhutho, iiCancer Buddies zakhe uvimba wolwazi olubanzi olucatshulwe kuhambo ngalunye lwazo. Oku sikudibanise nolwazi lwezixhobo ezihlonitshwayo ekunikeni ulwazi olubandakanya iindidi ngeendizi zenkqubo eziphilisayo ezincedisa izigulane zomhlaza kwakunye nabo bazikhathaleleyo. Ezi ngcebiso ziquka iinkalo ezibanzi, ukuqala kwindlela yokutya nokuzivocavoca, ukuya kulwazi nezixhobo ezincedisa izigulane ukuhlangabezana ngcono nezigaba zohambo lwazo ngokwasengqondweni nasemzimbeni.
IiCancer Buddies zifikeleleka lula kumaqonga ohlukeneyo aquka imfonomfono, e-mail kwakunye noWhatsApp. Bazinikele ekuxhobiseni izigulane zomhlaza neentsapho zazo ngethuba bejamelene nalo mnqantsa ngokwasengqondweni nakwiimvakalelo, ukususela ekufumaneni iindaba zokuba nomhlaza nasemva koko. IiBuddies zohluke kakhulu ngendlela ezinika ngazo inkxaso ngezandla ziphelele, kwaye zizinikezele nzulu ngalenkqubo yenkxaso. Naxa unyango loogqirha selugqityiwe, iiCancer Buddies ziyaqhubekeka ukuncedisa ngendlela ebaluleke kakhulu ekwakheni isiseko sesahluko esilandelayo kubomi besigulane.
“Vumela iiCancer Buddies zikuncede xa uqala uhambo lwakho lokuphilisa umhlaza.”